रबि लामिछानेपछी सर्बेन्द्र खनाल पुगे ओलीलाई भेट्न अस्पताल, हतार हतार आइसियुमामा लगियो …….(भिडियो सहित) « Online Tv Nepal
रबि लामिछानेपछी सर्बेन्द्र खनाल पुगे ओलीलाई भेट्न अस्पताल, हतार हतार आइसियुमामा लगियो …….(भिडियो सहित)
Published :4March, 2020 5:24 pm
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मिर्गौला दान गर्ने समिक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो भएको चिकित्सकले बताएका छन्। उनको होस आइसकेको र वार्डमा सारिएको उपचारमा संलग्न डाक्टर प्रेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘उहाँको होस आइसकेको छ’,उनले भने,‘अहिले पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा सारिएको छ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यक्रियापछि होस खुलेको छ।
शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको केहीबेरअघि होस खुलेको हो। उनको नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न पनि थालिसकेको छ। ‘नयाँ किड्नीले काम गर्न पनि थालिसकेको छ,’ ती चिकित्सकले भने। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पोष्ट अपरेटिभ वार्डमा सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका हुन्। १३ वर्षअघि भारतको नयाँदिल्लीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीले यसपालि स्वेदशमै त्रिवि शिक्षण अस्पताल रोजेका हुन्। अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको हो।